Xisbul-Islaam oo amaro ku soo rogay Beledweyn oo ay ka arrimiyaan. – Radio Daljir
Xisbul-Islaam oo amaro ku soo rogay Beledweyn oo ay ka arrimiyaan.
Nofeembar 25, 2009 12:00 b 0
Beledweyn, Nov 25 – Maamulka Xisbul-Islaam ee ka Arrimaya magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiran ayaa amarro ku soo rogay dadka deggan magaalada Beledweyn iyo nawaaxigeeda.
Amarrada maanta ay soo rogeen maamulka Xibul-Islaam ee magaalada Beledweyn ayaa ahaa kuwo lagu isku farayey dhawr arrimood oo wax looga badalayo xaaladda dhaqan iyo midda cibaado deegaannadaasi.
Isbul-Islaam, waxay Beledweyn ka mamnuuceen cunista qaadka iyo qaadashada dharka khafiifka ah, iyagoo taa badalkeedana haweenka ku amaray in ay xirtaan xijaabo waaweyn oo suurto-gal ka dhigikara dhawrista ama qarinta jirkooda oo dhan, waxaana sidoo kale ay dadka ku amreen in cibaadada la oogo gaar ahaan salaadda.
Saraakiil xagga ammaanka ah oo ka tirsan ururka Xisbul-Islaamka Beledweyn ayaa sheegay amarradaasi in ay dhaqan galayaan isla xilliga lagu dhawaaqay, waxayna intaasi ku dareen ciddii ku xad-gudubta in ay la kulmi doonaan ciwaab adag.
Inkastoo fakar iyo siyaasad ahaanba ay kala fog yihiin Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam haddana tnta badan amarrada noocaan oo kale ah waxaa lagu yaqaanay ururka Al-shabaab, hase ahaatee hadda waxaa moodaa in ay isku waddo ku soo dhaceen marka la fiiriyo amarrada kuwaan oo kale ah.
?Tartanka ciyaaraha gobollada Puntland oo bilaaban doonaan 1-da December.
?Khasaare ka dhashay dagaalo ku dhex maray Muqdisho AMISOM & Islaamiyiinta Somaliya.